Syphilis - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကာလသားရောဂါဆိုတာ လိငျကတဆငျ့ ကူးစကျတတျတဲ့ ရောဂါတှထေဲက တဈမြိုးဖွဈပွီး…. ထရပျပိုနီးမားပယျလီဒမျ လို့ချေါတဲ့ ဘကျတီးရီးယားပိုးတဈမြိုးကူးစကျခံရခွငျးက ဖွဈတဲ့ရောဂါပါ…..
ရောဂါလက်ခဏာတှကေ ဘာတှလေဲ…. ဘယျလိုကူးသလဲ
ကာလသားရောဂါရဲ့ ပထမဆုံး လက်ခဏာကတော့…chancre လို့ချေါတဲ့ နာကငျြမှူမရှိတဲ့ အနာသေးသေးဝိုငျးဝိုငျးတှပေေါကျတာပါပဲ… လိငျအဂျါတှဖွေဈတဲ့ မအဂျါ…စအိုနဲ့ ပါးစပျတှမှော ပေါကျတတျပါတယျ…
တခြို့တှကေတြော့ အနာက သေးတဲ့အတှကျ ကိုယျ့မှာ ရောဂါဖွဈနတေယျဆိုတာကို ခကျြခငျြးသတိမထားမိသူတှတေောငျ ရှိပါတယျ…
တခြို့တှေ ကတြော့လဲ နှဈပေါငျးမြားစှာ ဘာရောဂါ လက်ခဏာမှ မပွဘဲ ရှိနတေတျပါတယျ…. ရောဂါကို စောစောသိရငျတော့ စောစောကုသမှူ ခံယူနိုငျပွီး…. အရေးကွီးတဲ့ ကိုယျတှငျးအဂါတှေ ဥပမာ( နှလုံး၊ ဦးနှောကျ ) ထိခိုကျမှု ကနေ ရှောငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ…
ရောဂါအဆငျ့အနနေဲ့ ပထမအဆငျ့၊ ဒုတိယအဆငျ့၊ နှောငျးပိုငျးအဆငျ့နဲ့ တတိယအဆငျ့ဆိုပွီး လေးဆငျ့ရှိပါတယျ…. ပထမနဲ့ ဒုတိယအဆငျ့တှမှော တခွားသူကို ရောဂါအကူးစကျစနေိုငျဆုံးပါပဲ…
နောကျဆုံး အဆငျ့ကတော့ အသကျအန်တရာယျရှိပါတယျ..
ရောဂါလက်ခဏာတှအေနနေဲ့ chancre အနာအပွငျ ဒါတှလေဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ
လဖွေတျခွငျး သို့မဟုတျ ဦးနှောကျအမွှေးပါးရောငျခွငျး
ဦးနှောကျ သို့မဟုတျ အာရုံကွောမကွီးပကျြစီးခွငျး
အဲဒီအနာတှကေို တိုကျရိုကျထိမှသာ ရောဂါကူးတာမဟုတျဘဲ… ရောဂါရှိသူနဲ့ အဝတျအစားတှအေတူဝတျတာ… အိမျသာမြှသုံးတာ… အစားအသောကျပနျးကနျခှကျယောကျကနတေောငျ ကူးနိုငျတယျဆိုပါတယျ…
တကယျလို့ သငျ့မှာ ကာလသားရောဂါရှိနမေလားလို့ သံသယဝငျတယျဆိုရငျ… နီးစပျရာဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျလို့ VDRL လို့ချေါတဲ့ သှေးစဈပွီး ရောဂါရှိမရှိ သိနိုငျပါတယျ..
Chancre အနာတှရှေိရငျ အနာတှကေနလေဲ ရောဂါရှိမရှိ ဓာတျခှဲစမျးသပျလို့ရပါတယျ…
ပထမနဲ့ ဒုတိယ အဆငျ့မှာဆိုရငျ ကာလသားရောဂါကို Penicillin လို ပိုးသတျဆေးမြိုးနဲ့ လှယျလှယျကူကူ ကုသလို့ရပါတယျ… တကယျလို့ လူနာက Penicillin နဲ့ ဓာတျမတညျ့ဘူးဆိုရငျတော့… Doxycline , Azithromycin,Ceftriazone လို ပိုးသတျဆေး မြိုးနဲ့ သငျ့ဆရာဝနျက ကုသပေးပါလိမျ့မယျ…
ကုသနစေဉျအတှငျးနဲ့ ရောဂါလုံးဝပြောကျသညျအထိ လိငျဆကျဆံခွငျးကို ရှောငျကွဉျရမှာဖွဈသလို…သငျ့ လိငျဆကျဆံဖျောကိုလဲ တပွိုငျနကျတညျး ကုသရမှာဖွဈပါတယျ…
အကောငျးဆုံး ကာကှယျနညျးကတော့ safe sex လို့ချေါတဲ့ အန်တရာယျကငျးတဲ့ လိငျဆကျဆံမှူမြိုးဖွဈဖို့ပါပဲ… ရှောငျနိုငျရငျရှောငျပါ… မရှောငျနိုငျရငျ condom ကို စနဈတကသြုံးပါ…
တဈဦးအပျေါတဈဦးသစ်စာရှိပွီး လိငျဆကျဆံဖျောမမြားစခွေငျးဟာ အကောငျးဆုံးကာကှယျမှူပဲ ဖွဈပါတယျ..
ကာလသားရောဂါဆိုတာ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေထဲက တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး.... ထရပ်ပိုနီးမားပယ်လီဒမ် လို့ခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတစ်မျိုးကူးစက်ခံရခြင်းက ဖြစ်တဲ့ရောဂါပါ.....
ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ.... ဘယ်လိုကူးသလဲ
ကာလသားရောဂါရဲ့ ပထမဆုံး လက္ခဏာကတော့...chancre လို့ခေါ်တဲ့ နာကျင်မှူမရှိတဲ့ အနာသေးသေးဝိုင်းဝိုင်းတွေပေါက်တာပါပဲ... လိင်အဂ်ါတွေဖြစ်တဲ့ မအဂါ်...စအိုနဲ့ ပါးစပ်တွေမှာ ပေါက်တတ်ပါတယ်...
တချို့တွေကျတော့ အနာက သေးတဲ့အတွက် ကိုယ့်မှာ ရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ချက်ချင်းသတိမထားမိသူတွေတောင် ရှိပါတယ်...
တချို့တွေ ကျတော့လဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘာရောဂါ လက္ခဏာမှ မပြဘဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်.... ရောဂါကို စောစောသိရင်တော့ စောစောကုသမှူ ခံယူနိုင်ပြီး.... အရေးကြီးတဲ့ ကိုယ်တွင်းအဂါတွေ ဥပမာ( နှလုံး၊ ဦးနှောက် ) ထိခိုက်မှု ကနေ ရှောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
ရောဂါအဆင့်အနေနဲ့ ပထမအဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့်၊ နှောင်းပိုင်းအဆင့်နဲ့ တတိယအဆင့်ဆိုပြီး လေးဆင့်ရှိပါတယ်.... ပထမနဲ့ ဒုတိယအဆင့်တွေမှာ တခြားသူကို ရောဂါအကူးစက်စေနိုင်ဆုံးပါပဲ...
နောက်ဆုံး အဆင့်ကတော့ အသက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်..
ရောဂါလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ chancre အနာအပြင် ဒါတွေလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
လေဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်း
ဦးနှောက် သို့မဟုတ် အာရုံကြောမကြီးပျက်စီးခြင်း
အဲဒီအနာတွေကို တိုက်ရိုက်ထိမှသာ ရောဂါကူးတာမဟုတ်ဘဲ... ရောဂါရှိသူနဲ့ အဝတ်အစားတွေအတူဝတ်တာ... အိမ်သာမျှသုံးတာ... အစားအသောက်ပန်းကန်ခွက်ယောက်ကနေတောင် ကူးနိုင်တယ်ဆိုပါတယ်...
တကယ်လို့ သင့်မှာ ကာလသားရောဂါရှိနေမလားလို့ သံသယဝင်တယ်ဆိုရင်... နီးစပ်ရာဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်လို့ VDRL လို့ခေါ်တဲ့ သွေးစစ်ပြီး ရောဂါရှိမရှိ သိနိုင်ပါတယ်..
Chancre အနာတွေရှိရင် အနာတွေကနေလဲ ရောဂါရှိမရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်လို့ရပါတယ်...
ပထမနဲ့ ဒုတိယ အဆင့်မှာဆိုရင် ကာလသားရောဂါကို Penicillin လို ပိုးသတ်ဆေးမျိုးနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ကုသလို့ရပါတယ်... တကယ်လို့ လူနာက Penicillin နဲ့ ဓာတ်မတည့်ဘူးဆိုရင်တော့... Doxycline , Azithromycin,Ceftriazone လို ပိုးသတ်ဆေး မျိုးနဲ့ သင့်ဆရာဝန်က ကုသပေးပါလိမ့်မယ်...
ကုသနေစဉ်အတွင်းနဲ့ ရောဂါလုံးဝပျောက်သည်အထိ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်သလို...သင့် လိင်ဆက်ဆံဖော်ကိုလဲ တပြိုင်နက်တည်း ကုသရမှာဖြစ်ပါတယ်...
အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နည်းကတော့ safe sex လို့ခေါ်တဲ့ အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှူမျိုးဖြစ်ဖို့ပါပဲ... ရှောင်နိုင်ရင်ရှောင်ပါ... မရှောင်နိုင်ရင် condom ကို စနစ်တကျသုံးပါ...
တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးသစ္စာရှိပြီး လိင်ဆက်ဆံဖော်မများစေခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..